Manampy amin’ny fampitsaharana ny fanapahana hazo fingotra efa zato taona any Guyane ny tsindry ataon’ny vahoaka · Global Voices teny Malagasy
"Mitroka" CO2 ary "mampiavaka" ilay faritra ireo hazo
Voadika ny 15 Febroary 2021 5:20 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, русский, Español, Français, English
Pikantsary mampiseho ny faritra Mabaruma any Guyane nalaina avy amin'ny Google Earth.
Any amin'ny faritr'i Mabaruma any Guyane, any amin'ny lembalemba tery eo ambonin'ny ala mando tsy lavitra ny sisintanin'ny firenena miaraka amin'i Venezoelà no misy ny ala kelin'ny hazo fingotra, efa ho zato taona, atahorana hotapahina hanamorana ny fanitarana lalana.
Nanomboka nanao fanangonan-tsonia an-tserasera hampiatoana ny fanapahana azy ireo ny mpiaro ny tontolo iainana ao an-toerana, izay nilaza fa ireo hazo, ankoatra ny famokarana oksizenina sy ny fitrohana ny gazy karbonika, dia endrika iray “mampiavaka” an'io faritra io.
Nanolo-kevitra ny fambolena hazo indray ireo mpanohana ny fanitarana ny lalana raha nilaza kosa ny mpiaro ny tontolo iainana fa miasa toy ny “fitaovana mitroka” ireo hazo tranainy ireo, toy ireo manamorona ny Lalambe Philbert Pierre (antsoina hoe Rubber Walk) ka mitroka bebe kokoa ny karibônina noho ny hazo tanora kokoa. Efa nanao antso tamin'ireo olona tompon'andraikitra amin'ny tetikasa fanitarana ny lalana izy ireo mba hijery ireo hazo amin'izany fanamboarana izany, ka hitady lalana hafa any amin'ny manodidina. Efa nahazo sonia miisa 4000 ny fanangonan-tsonia tamin'ny fotoana namoahana ny lahatsoratra.
Nokasaina ho kapaina tamin'ny 27 Janoary ireo hazo. Na dia nitaraina aza ny mpikatroka fa tsy nahita ny sary lehibe ny mponina ao Mabaruma. Nanome toromarika ny ben'ny tanàna ny Minisitry ny Governemanta eo an-toerana sy ny Faritra Fampandrosoana, Nigel Dharamlall, mba hampitsaharana ny fikapana hazo ary nanazava fa “manamarika” an'io faritra io ireo hazo ireo. Hatreo anefa dia efa hazo miisa 10 ka hatramin'ny 12 no efa natao sorona.
Nambaran'ny tompon'andraikitra fa notanterahina teo ambanin'ny governemanta teo aloha ny fakan-kevitra natao tamin'ny vondrom-piarahamonina, izay nilazan'ny mponina hoe mampidi-doza azy ireo ny hazo. Nangataka ny hamoahana ny valin'io fifampidinihana io ny Minisitra Dharamlall, miaraka amin'ny lisitra feno misy ny anaran'ny mpandray anjara ary nanery ny Minisiteran'ny Asa vaventy mba hitady vahaolana ara-teknika mety mba hamelana ireo hazo sisa tavela amin'ny toerany.
Namaly ny filankevitra monisipaly tamin'izany fa mila manam-pahaizana momba ny ala hamaritra raha toa ka mampidi-doza ny mponina tokoa ireo hazo.
Nandritra izany fotoana izany, nitatitra ny GSA News fa mijoro amin'ny lafiny roa amin'ny olana ny mponina ao amin'ilay faritra, ary nilaza fa efa nampiady hevitra hatrizay ny fanapahana ireo hazo. Raha misy manohana ity làlana ho an'ny fampandrosoana ny faritra ity ny sasany, ny sasany kosa manamafy fa azo itarina ny làlana sady tazonina hatrany ny hazo, izay mampiavaka ny toerana ary lasa manintona mpizahatany ihany koa.
Raha nomarihin'ilay mpisera Facebook Raquel Thomas-Caesar fa “mbola fampandrosoana ihany koa ny fampandrosoana miaraka amin'ny fiheverana ny lova” dia nandefa ny sarin'ilay faritra, miaraka amin'ny fitantarana fohy izy.
Ny boky nosoratan'ilay mpanoratra Vincent Roth “A life in Guyana Volume 2” dia nidera an’ i Philbert Pierre, izay nitantana ny tanimboly hazo fingotra sy fambolena kakao mirefy 400 hekitara manamorona ny Renirano Aruka, ho ilay “lehilahy manana vina” izay “nino ny fanambinana” ny distrika avaratra andrefan'i Guyane ary nanao izay rehetra azony natao mba hampandrosoana azy. Tamin'ny 1922 izy no namboly ireo hazo fingotra.